China PROTMEX PT202A Digital 12V - 1000V AC Voltage Detectors Non Qhagamshelana Tester Pen Volt yangoku Electric Test Ipensile mveliso kunye nabenzi | Ukuvelisa
Umvavanyi woMgangatho woMoya
I-PROTMEX PT202A yeDigital 12V - 1000V AC Vol ...
I-PROTMEX PT19D ye-Digital Hygrometer ye-Thermom yangaphakathi ...
I-PROTMEX PT201B Ukushisa kwangaphandle kwangaphakathi kufumile ...
I-PROTMEX PTH-5 Wall Mount Carbon dioksayidi yedijithali ...
I-PROTMEX PT202A yedijithali ye-12V-1000V yeeVolthi zokuCoca iiVolthi ezingezizo ezokuNxibelelana noMvavanyi wepen Volt Ipensile yoVavanyo lwaMandla ngoku.
Imveliso inokulinganisa umbane
Umbane osebenzayo: I-AC Voltage: 12 ~ 1000V (50 / 60Hz);
Ubuninzi obuphezulu: 12 ~ 1000V;
Ukuziva okuphakathi: 48 ~ 1000V;
Ubuntununtunu obusezantsi: umahluko wokuPhila kunye nokungathathi hlangothi;
Ubushushu obusebenzayo: 0 ~ 40 ℃,
Ubushushu bokugcina: -10 ~ 50 ℃;
5.Ukuthoba: ≤ 85%;
6.Ibhetri: 2 x 1.5V AAA
1. Imveliso yenziwe ngezinto ezisemgangathweni ezikrwada kwaye inemilo yeklasikhi;
2. Ubuthathaka kwaye buchanekile ngokomlinganiso;
3.Ncinci ngobukhulu kunye nobunzima bokukhanya, kulula ukuyiphatha;
4. Ilula ukusebenza kwaye kulula ukuyisebenzisa
Isatifikethi esibalulekileyo: CE / RoHS / FCC
Umthamo wemveliso eyomeleleyo: Ixesha lokuvelisa ziintsuku ezili-15 ~ 30
Yiba namandla ophando kunye nophuhliso: Iimveliso ziyilelwe kwaye zaphuhliswa sithi
Q: Yintoni MOQ yakho? Ixesha Lead?
A: Asinayo i-MOQ kuzo zonke iimveliso, i-1 PC nayo ilungile. Phantse zonke iimveliso zisesitokhwe sokuhanjiswa ngenqanawa ngokukhawuleza, zihlala zisebenza iintsuku ezi-3, kodwa ngamanye amaxesha ulwazi lwamalungiselelo luya kulibaziseka.
Q: Uyayamkela inkonzo ye-OEM / ODM?
A: Zombini i-OEM kunye ne-ODM zamkelwe kakhulu okoko uhlangana ne-MOQ yethu kwaye sikhetha iiodolo ezinje nge-OEM kunye ne-ODM kuba ubuninzi bukhulu kwaye abathengi bazinzile.
Q: Yintoni na inkonzo yakho emva-kwentengiso kunye iwaranti?
A: Iwaranti yethu ingunyaka omnye kwaye sinokuyilungisa simahla kuwe ngaphakathi kwewaranti ukuba nje ingxaki ayenzwanga ngokobuqu. Ukuba iingxaki zobuqu kunye nokuphuma kwewaranti umthengi kufuneka ahlawule umrhumo wokuhambisa kunye nomrhumo wokulungisa xa kufuneka.Izinto ezincinci sinokuzithumela simahla endaweni elandelayo.
Q: Lithini ixesha lakho lokuhlawula kunye nexesha leshishini?
A: Ungasibhatala nge-paypal, wechat, ukudluliselwa kwebhanki, nayiphi na indlela ilungile, kuba isampulu sihlala siyithumela ngokubonisa njenge-DHL, i-EMS, i-UPS, i-Fedex, i-Aramex njl njl. , FOB, EXW, DAP, CIF zonke zamkelwe.
Q: Singakuthemba njani? Kwaye sikufumana njani ukuba awuyithumeli imveliso?
A: Sikwisithili seNanShan, eShenzhen, ungacela nawuphi na umhlobo waseTshayina asityelele. Emva kokuba i-odolo yakho ibekiwe, ukuba asithumeli ngexesha, ungakhalaza kuthi. Ukuba uhlawula nge-escrow okanye nge-paypal, ikhuselekile nangakumbi. Ungasifumana ngewebhusayithi / nge-imeyile ngalo naliphi na ixesha (iiyure ezingama-24 * iintsuku ezisi-7), ukuba asiphenduli ngexesha esinokulala ngalo ebusuku, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Umbuzo: Ubeka njani iodolo?
A: Unokukhetha imodeli kunye nobungakanani obufunayo, emva koko sijonge umrhumo wokuhambisa kwaye sikuthumele i-invoyisi yeProforma ukuba uyihlawule. Intlawulo ekwi-Intanethi ngokudluliselwa kwebhanki iyangqinwa, abanye nabo balungile. Emva kokuba usibhatale siya kuthumela ngqo kwidilesi yakho, emva koko uhlawule ukufumana iifowuni kwivenkile yasekhaya ukuhlawula irhafu ukuba iyafuneka, emva koko bakunike. Nceda ungalibali ukusinika ingxelo ukuba wanelisekile yimveliso kunye nenkonzo yethu.
Egqithileyo I-PROTMEX PT19D yeDigital Hygrometer yangaphakathi kwiThemometha yoBushushu kunye nokuFuma kweGreyithi yokuGcina iGram Thermometer
I-PROTMEX PT19DE I-Thermometer yangaphakathi yedijithali yeHygro ...
Umgangatho we-5, Isakhiwo A, No. 9, Dakan Gongye 2 Road, Dakan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen.